Kenya oo Bilwoday qorshe cusub oo ay kaga hortageyso weerarada... | Universal Somali TV
Kenya oo Bilwoday qorshe cusub oo ay kaga hortageyso weerarada Al-Shabaab
Wasaarada arimaha gudaha iyo amniga Kenya ayaa bilowday dadaalo ay ku dooneyso in lagu xaqiijiyo amaanka gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanada u dhow xuduuda Soomaaliya.
Iyadoo tan iyo bishii December ee sanadkii hore ay weeraro isdabajoog ah ka dhacayeen gobolka ayaa arintaan waxay saameyn ku yeelatay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii cabsi xoogan ay soo wajahday shaqaalaha dowlada ee ka soo jeeda gobolada kale ee Kenya.
Qorshaha ugu horeeya ayaa ah in ciidan dhan sadax boqol oo boolis ah oo ku qalabeysan hubka nuucyadiisa kala duwan la geeyo gobolka gaar ahaan kuwa soomaali ah oo ka soo jeeda deegaanada ay ka jirto Cabsida.
Ciidankan cusub ayaa wax ka badali doona sugida amniga sida uu Universal Tv u xaqiijiyay sargaal ka tirsan laamaha amniga waqooyi Bari oo diiday magaciisa in halkaan lagu Xuso.
Waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan ay gaaraan saldhigyada kala duwan ee ciidanka Amniga.
Dadaaladan lagu xaqiijinayo amniga ismaamulada Garissa Wajeer iyo Mandera ayaa imaanaya maalin uun kadib markii gudiga adeega macalimiinta ee TSC ay ku dhawaaqeen in barayaasha aan u dhalan gobolka ay ka soo daad gureyn doonaan deegaanada u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Kan-xigaQaramada Midoobay oo walaac ka muujis...
Kan-horeMadaxweyne Erdogan oo Midowga Yurub u...
Kooxo hubeysan oo laba qof ku dilay Gobolka Shabellaha Hoose
Odayaasha Dhuusamareeb oo sheegay in laga been sheegay kulankii General Mascuud
Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya Sharciga Qaxootiga
Guddiga Farsamada Hirshabelle oo gaaray Magaalada Jowhar (SAWIRRO)
55,406,253 unique visits